Libra umntu athimba - Ividiyo Dating USA
Libra umntu athimba – Ividiyo Dating USA
I-Libra umntu uthanda ukuba uthando, kodwa uyakwazi scare kuye ngoku, ukuba ufuna ukuba izakuba sentimental. Ukuba ufuna ukutsala ingqalelo yakhe kwaye yakhe Affection, ufuna ukuphumelela, ngoko ke isibheno yakhe uluvo ungqinelwano kwaye ubuhle. Hamba kunye ukukholosa kuye, kodwa kumnika ixesha, ngendlela yakhe inyathelo nje ngaba umisela. I-Libra umntu uthanda ukuba uthando, kodwa uyakwazi spook kuye, ukuba usondele kakhulu sentimental uza. Ukuba ufuna ukutsala ingqalelo yakhe kwaye yakhe Affection, ufuna ukuphumelela, ngoko ke isibheno yakhe uluvo ungqinelwano kwaye ubuhle. Hamba kunye ukukholosa kuye, kodwa kumnika ixesha, ngendlela yakhe inyathelo nje ngaba umisela. I-Libra umntu ufumana i-extrovert kwaye uthanda ukuya kuhlangana abantu kwaye entertain. Ungafumana kuye rhoqo kwi-amaqela, ukusuka apho ke protrudes njengoko umbindi we-Iqela. Ukuba ufuna ukutsala ingqalelo yakhe, ngoko ke nifanele ukuba umnqamlezo wakhe indlela kaninzi kangangoko kunokwenzeka yakhe yendalo esingqongileyo: kwi indimbane abantu. Ukususela uninzi Libra abantu bakholisa ukuba ube kunye abantu abaninzi nezihlobo, uza kuba ukwenza ngaphezu nje kuba kwiqela. Endaweni kwenye indawo egumbini emi jikelele, apho akukho mntu ubona wena, kufuneka ubeke kuwe ngendlela umbindi we ingqalelo, nkqu ukuba aba ngabo kuphela ezimbalwa moments.
Yakho Libra umntu flirting mhlawumbi kunye abafazi abaninzi, ngaphandle necessarily nantoni na Ezinzima. Abanye abafazi ngoluhlobo kuyibuza kuwe ngaphandle, kodwa abanye qhoboshela hayi kakhulu ukubaluleka. Ukuba ukhe ubene hoping ukuba babambisa a glimpse ye-Affection a Libra umntu, ngoko ke kufuneka belong ukuba yokugqibela yeqela. Beka phantsi kwi-kukho de Kuphumla yakhe admiration kuphulukana nayo ngaphakathi nomonde kunye yakhe Flirtation. Khumbula ukuba Libra abantu kuyanqaphazekaarely kuba ozithandayo. Nkqu ukuba ufuna ukutsala kuye ngokukhawuleza, abe nokufumana nje nezinye abafazi ukusuka yakhe lwezentlalo-bume nabafana. Ukuba ufuna waphumelela kolu ukhuphiswano ngokuchasene nabanye abafazi, ngoko ke kufuneka ube perseverance. Yintoni relates kwi-Visual, ingaba abafazi kunye ubufazi inkangeleko, okkt ukuba zoba kakhulu i-ingqalelo le Libra umntu, kwaye lowo ufumana purely kwi-Physical esinzima. Uphephe i-fashion umlinganiselo we-excessive ingaba daring, okanye dresses ukuba embellished. Uphephe flashy imibala, amagama amakhulu iipateni, okanye yethutyana Ngoko ukuba ingaba uye namhlanje ke fashion kwaye namhlanje. Excessive Sebenzisa”Kubekho Inkqubela”Fashion, njenge lace kwaye bows, unako kanjalo kuba ngaphandle putting. Khetha ukusuka classic, cacisa-sika iintlobo, kwaye imibala ukususela esiqhelekileyo umbala yezixhobo.
Kwambatha comment kwaye hayi ngomhla fashion inyaniso
Umxholo we-Finesse kufuneka kanjalo yandisa yakho Makeup kwaye yakho izinto ezongezelelwayo. Sebenzisa yakho Makeup ukuphucula yakho ubuhle bendalo, phawula, uphephe kakhulu Kakhulu Ukwenza-phezulu okanye dramatic umlinganiselo. Jewelry kufuneka accentuate inkangeleko yakho, kwaye ingabi uyithumela screaming. Ngaphakathi i-zodiac, ukulingana umfanekiso wakho kuba esivakalayo. I-Libra umntu uya bazive ngaphandle balanced kwiimeko kwaye abantu bamele attracted. Ukuba ukhe ubene uthetha malunga okokuqala naye, kuba eyobuhlobo, glplanet kwaye anike a balanced Aura. Ngokufanayo, xa lokumema Libra indoda yakho personal isithuba – – ofisi yakho, imoto okanye yakho apartment ngu – qiniseka ukuba ke lowo ufumana i-intle, balanced uhlobo. Libra babantu abakho narcissistic, kodwa njengoko abantu abaphila extroverted personality, unaso tendency ukuthetha malunga ngokwabo kwaye izinto ukuba umdla. Ukuba ufuna impress kuye, ngoko ke mvumeleni thetha kwaye kuye intliziyo yakhe kuthululela ngaphandle aze alandele incoko ngenyameko. Uninzi Libra abantu ukuba neentloni kude impixano, kwaye kufuneka iqhube ukusuka confrontations, kodwa ngaxeshanye, baya appreciate ke, jonga izinto ukusuka ezahlukeneyo perspectives. Khetha isihloko kuba ngxoxo-mpikiswano kwaye uxoxe omabini naye. Kodwa khumbula ukuba baphile incoko intellectual kunokuba yeemvakalelo zakho. Libra abantu ikholisa ngenye uqinisekile kwaye kuba imbono ka-ngokwakho. A ezinzima compliment okanye ilizwi psalms, ekunene ixesha, unako kunizisa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku, ukuba uya kuba efuna ingqalelo babambisa ngathi. Kuba compliment, kufuneka ukhethe umxholo, Libra abantu onomdla kuso i-lohlobo uhlobo, ezifana incasa, isimbo, okanye ubulungisa. Akukho mntu iyathemba a blatant Flatterer, hayi kwa Libra umntu. Abe kwesizathu a clumsy umzamo ngomhla wakhe vanity ngaphezu komnye imiqondiso, kodwa compliment, le asiyiyo ngokucacileyo inyaniso okanye banyanzeleka izandi, akunjalo correspond ukuba unye ka-eharmony, okanye Isidima, ikhangela a Libra umntu ultimate. Ngamnye compliment kufuneka kubalulekile kwaye njengoko inyaniso kangangoko kunokwenzeka. Impress yakho Libra umntu nge-uthetha malunga ezininzi ezahluka-hlukileyo izihloko. Izikali uthando ukuthetha kwaye exchange izimvo kwaye amanqaku ka-imboniselo ezininzi izihloko. Ukuba uyakwazi ukugcina kuye intellectually stimulated, ngoko ke uya kufumana yakho personality ngakumbi nabafana kwaye glplanet yakhe kufuphi. Izikali kuba ngokwemvelo a okuthile airy personality, ngoko baye bazive iphenjelelwe kakhulu xa ungakwazi ukusuka isihloko ukuba isihloko. Ukuze ulungise kuye kwi-isihloko, ungafumana okruqukileyo nge Libra umntu ngokukhawuleza. Izikali ingaba longing kuba Ukulingana, kwaye oku Ungqinelwano ivakalisa ngasemva lwesiqu Ubomi benu Libra umntu. Njengoko Jikelele umthetho: izikali ndinomsebenzi omkhulu uluvo ubulungisa kwaye Isidima. Ukuba uya kuba Libra umntu nabafana ufuna umthetho, ngoko ke kufuneka uqinisekise ukuba uya kuthatha kuwe njengoko umntu kunye efanayo kakhulu olomeleleyo uluvo ubulungisa inyaniso. Nangona izikali uthando ukubakho jikelele abantu, bakholisa ukuba decouple uninzi izikali kuba yeemvakalelo zakho. Ukuba lowo learns ibetha kuwe okokuqala kwaye ndiyazi, uphephe zininzi kakhulu emotions, nokuba dibanisa okanye uthabatha. Zama ukuqonda ukuba kutheni yena uziva ngathi usasebenzisa e utshintsho lwendawo ngokwenqanawaname uncomfortable. Uvakalelo ingaba messy, ingakumbi ukuba nemvakalelo ingaba nzulu kwaye enzima. Hlengiso avoids emotions, ukugcina kweharmony kwaye Echaza ukuba uza uthando. Ukuba ufuna ukuba ube kunye yakho Libra umntu ixesha elide, ngoko uza zombini, ngokukhawuleza okanye kamva, yakho emotions kufuneka confront. Xa elo xesha iza, ngoko ke kuya enze njalo a icimile kwaye rational indlela, njengoko kunokwenzeka. Ekuqaleni a budlelwane, kodwa kubalulekile eyona ukuphepha nzulu emotions. Enxulumene ne-dislike ka-Libra abantu emotions, lowo hates ungquzulwano. Nkqu ukuba lowo likes intellectual debates ukuba ingaba yaxhobisa ibe igcwalisiwe debates ingaba into yena avoids. Ngoko ke, uzole, phantsi mhlaba attitude gcina, ukuba uthetha yakho Libra umntu ke isazisi, kungenjalo lowo isebenzisa kude. Kufuneka ube vula kwaye talkative, kodwa ngenyameko constructed abancinane secrets unako arouse yakhe curiosity waza wamenza ukuba ufuna ukufunda ngakumbi. Ukuba uyakwazi stimulate oku uluvo curiosity, ngoko ke uyakwazi ukufumana yakhe ingqalelo lula. Wokuqala impression abe efumana kuni, kufuneka”mysterious ubuhle”. Kunjalo, Mysterious isenzi, ithuba elidana nisolko kunye Libra umntu. Ukuze ube okulungileyo Qala, zama ekuqaleni kuba unreachable kwaye kuba phantse ukwenzeka ukufikelela kwinjongo yethu. Uninzi izikali kuba i-altruistic Umoya, ngoko ke awuqinisekanga rhoqo owenza kunye volunteer umsebenzi. Nkqu ukuba umyeni wakho akaxhasi nayiphi na ingingqi lwenene okanye charitable sizathu, uya kufumana umntu abo amadini ixesha lakhe, ingakumbi nabafana. Ukuba ukhe ubene phandle phaya esebenzayo kwi kungokuzithandela umthamo, ngoko ke cinga yakho Libra mema umntu, ingakumbi ukuba kunzima into, oko onomdla kuso. Ukuba ufuna ntoni, ke futhi ke kuba umntu abo ngokuphonononga kuye ukwazi eyiyeyakhe banqwenela ukwenza into Elungileyo. Izikali, kunzima ukuba kugxininisa kuphela into enye, kwaye yakho Libra umntu uza kufumana kuwe ngaphantsi nabafana, ukuba lowo ikholelwa ukuba ufuna kuphela omnye umba ubomi ukuya phambili. Ukuba kubonakala njengokuba balanced, multi-zidibene Umntu, ngoko ke kufuneka ube ezimbalwa ezahlukeneyo imisetyenzana yokuzonwabisa, uyakwazi thetha naye. Uninzi Libra abantu appreciate ubuhle nenkcubeko, ngoko ke intliziyo yakhe iya wambetha, ukuba ngaba mema kuye kwi-ziko lolondolozo lwembali libalaseleyo okanye Incwadi kunye iifoto ka-beautiful landscapes nika. Bonisa kuye ukuba uyayiqonda into nguye loves – enako omkhulu Dibanisa kuba kuni. Ukuba ufuna mema kuye, ngoko khetha indawo ukuba uyakwazi bonwabele yakho Libra mntu, ngathi i-unguye igalari okanye craft yentengiso okanye ziko lolondolozo lwembali libalaseleyo. Uyakwazi kubonakala ukuba abe nangakumbi enjoyable ukuba mema kuye ukuba esebenzayo Msitho. Mema kuye, umzekelo, i-exhibition ukuba ufumana kuphela ngosuku, kunokuba a icimile ndwendwela kwi-ziko lolondolozo lwembali libalaseleyo. Kunye unguye nenkcubeko Libra abantu appreciate uninzi finer izinto ebomini. Ukuba ufuna ukuchitha ngayo mema ixesha kunye nawe, ngoko ke stunning iindawo ukukhetha, ezifana chic cafes, okanye-inkwenkwezi Restaurants. Ukuba uya kumnika into, kancinci incasa ka-khetha lizele a Designer. Ukuba unayo imali kwi luxury izinto kuba umlinganiselo-ilahlekile umntu, musa kuba besoyika. La madoda uthando ubuhle, kodwa oku akusebenzi kufuneka iindleko kakhulu. Ukufaka oko kuphela kuba Dessert ngendlela entle I Restaurant, ukuze ukugcina imali ukulungiselela engundoqo kunjalo, okanye yiya kwenye indawo apho kukho intle atmosphere, kodwa apho akunjalo expensive. Njengoko loluntu izidalwa uthando Libra abantu ke inkululeko kwaye kufuneka bazive unattached, ukuze ndonwabe. Uyakwazi xrayswarm jikelele kufuneka kangangoko ufuna xa usenza izinto kunye, kodwa musa smother kuye okanye tyhala kuye kwakho kuyo yonke imimandla ubomi bakhe, athe ikumeme kuwe ngokwam. Khumbula ukuba Libra umntu esebenzayo umntu, ngoko ke ukuba uya kuthatha a liking kuwe, uza kufumana i-ukuva oko. Umsebenzi kwesi sithuba steadily e kuye, kodwa hayi ukucinezela kuye imizwa yakho phambi kokuba ke ilungile. Libra abantu bathanda ukuba sithande kwaye ndiyakuthanda kuba wamthanda. Ezincinane tokens of appreciation unako ukwenza imizwa yakho kuba kuye kwaye kwi amehlo akhe ngakumbi nabafana.
Zama kumnika encinane isipho, nje ngolohlobo
Okanye kunikela kuye a Massage emva elide esemsebenzini. Wena musa ngathi unayo imali eyaneleyo ukuthenga Designer cufflinks, kodwa uyakwazi kuye, unako kuye Designer-chocolate ukuthenga, okanye beautiful injongo awunakuba chonga uze ukhethe, nokuba kunganjalo ukusuka Designer. Ukuba ufuna a free Enye, ngoko a beautiful qaphela ukubhala kuye. Apha, kakhulu, ubunzulu emotions kusini na Ilungelo nto kuba Libra umntu, kodwa ileta kunye a ezimbalwa mnandi iivesi, uyakwazi impress kuye kakhulu, njengoko ixesha elide njengoko iivesi kugxila ubuhle izinto kwaye hayi ngomhla ubunzulu nemvakalelo. Njengoko kukhankanywe ngasentla, kusenokuba distant, Libra umntu yeemvakalelo zakho, xa kufuneka ahlangane naye okokuqala. Ke ngoko, lowo avoids abafazi ukuba kubonakala ukuba abe manipulative okanye dramatic. Xa ufuna ukwenza lakho lokuqala ukusa, ngoko ke eyona hayi kuba kakhulu ezinzima kakhulu kwaye ngokukhawuleza. Makhe ndiye izinto lula, kwaye ufumana naye phezu kunye Gestures ka-esiqhelekileyo romance: candlelit dinners, uhamba phezu kwi-moonlight, njalo njalo. Ukuba lowo uqalisa reciprocate yakho Affection kwaye ingqalelo, ke uzimisele ukuba lowo ubonisa ntoni yena likes kwi-uthando lwakhe ubomi. Izikali ingaba yendalo charmers, ngoko ke, ukuba lowo ufuna ukuba athimba kunye charm, ngoko ke uya kusebenza ulungiso lomthetho romanticcomment tactics ukwenza oku. Qiniseka kwaye isicelo efanayo romanticcomment Gestures kwaye tactics
← Eyona Dating Apps Kuba Budlelwane Nabanye - Cela Abantu
Duden ukufunda ukwazi, ukufunda upelo, intsingiselo, Inkcazelo, izithetha ntonye →